people Nepal » बाबुरामको फोन प्रचण्डको वेवास्ता, जनकपुरका अनसनकारीको स्वास्थ्य चिन्ताजनक बाबुरामको फोन प्रचण्डको वेवास्ता, जनकपुरका अनसनकारीको स्वास्थ्य चिन्ताजनक – people Nepal
बाबुरामको फोन प्रचण्डको वेवास्ता, जनकपुरका अनसनकारीको स्वास्थ्य चिन्ताजनक
५ फागुन, काठमाडौं । विभिन्न ७ वटा मागहरु राखेर जनकपुर चोकमा नयाँ शक्ति पार्टीका नेता रामकुमार शर्मा र कलामुद्दीन राईन आमरण अनशन बसेको विहीबार १५ दिन पुगेको छ । यसबारे कुरा गर्न डा. बाबुराम भट्टराईले तारन्तार टेलिफोन गर्दा पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले फोन नउठाएको विहीबार नयाँ शक्ति पार्टीका नेताले गुनासो गरे ।
‘यसबारे डा. भट्टराई तीनचोटि फोन गर्नुभयो, तर प्रधानमन्त्रीले फोनै उठाउनुभएन’ विहीबार राजधानीमा मानव अधिकारकर्मी एवं सांसदसँगको एक छलफलमा नयाँ शक्ति पार्टीका नेताहरुले भने- ‘अनसनबारे पहिल्यै जानकारी गराइसकिए पनि प्रधानमन्त्रीले मलाई थाहै छैन भन्ने जवाफ दिएका छन् । अनसनकारीको स्वास्थ्यस्थिति कमजोर भइसक्दा पनि सरकारले वास्ता गरेको छैन ।
प्रधानमन्त्रीलाई पहिले नै जनकपुरको समस्याबारे अवगत गराइएको र अनसनबारे जानकारी गराइँदा पनि ‘मलाई थाहा छैन’ भन्नु आश्चार्यजनक भएको नयाँशक्ति पार्टीका रत्नेश्वरप्रसाद शर्माले बताए । उनले भने- ‘जनकपुरमा अनसन भइरहेको पत्रपत्रिकामा छ्याप्छ्याप्ती छ, के हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पत्रिका पढ्नुहुन्न ? टेलिभिजन हेर्नुहुन्न ?’
के-के छन् अनशनकारीमा माग ?
माघ २० गतेदेखि जनकपुरमा आमरण अनसन बसेका शर्मा र राईनले विभिन्न ७ वटा मागहरु राखेका छन् । शर्मा बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष, पूर्वसभासद तथा नयाँ शक्ति पार्टीका नेता हुन् । कलामुद्दीन राईन पनि नयाँ शक्ति पार्टीका केन्द्रीय नेता हुन् ।
उनीहरुको पहिलो माग धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय विकास अधिकारी जनकपुरको विकास विरोधी भएकाले उनीहरुलाई सरुवा गर्नुपर्छ भन्ने छ । भ्रष्टाचारमा मुछिएका परिषदका कार्यकारी उमेशकुमार यादवलाई संरक्षण गरेको भन्दै अनशनकारीले सिडिओ र एलडीओको सरुवा मागेका हुन् ।
अनसनकारीको दोस्रो माग छ- जनकपुर मन्दिरमा महन्थहरुका नाममा रहेको हजारौं विगाह गुठीको जग्गा भूमाफिया, प्रशासक र नेताहरुले नक्कली प्रमाण बनाई कब्जा गरेको हुनाले फिर्ता गरियोस् । र, रामजानकी मन्दिरलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न सरकारले पहल गरोस् ।
त्यसैगरी अनसनकारीहरुको अर्को माग छ- राजषर्ी जनकको राजधानी जनकपुरमा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल बनाइयोस् ।
राजर्षी जनक विश्वविद्यालय स्थापना कार्य २० औं वर्षदेखि अलपत्र परेको भन्दै अनशनकारीहरुले विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि ऐन पारित गरी तुरुन्त काम अघि बढाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्यस्तै धनुषा र महोत्तरीमा रहेको मणिपाल कलेजको एक सय विघा जमिनका बारेमा पनि अनसनकारीले माग रोखेका छन् । सो जग्गाबाट कौडीको मूल्य लिएर अन्यत्रै कलेज बनाउने मणिपाल कलेजका सञ्चालकलाई कारवाही गरिनुपर्ने अनसनकारीको माग छ ।
प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले भेट नदिए बालुवाटारमा धर्ना
यसैवीच अनशनकारीहरुको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएको भन्दै विहीबार राजधानीमा मानवअधिकारकर्मीहरुको एक भेला सम्पन्न भएको छ । भेलाले अनशनकारीहरुको मागलाई चाँडो सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
यसबारे प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउन समय माग्ने र समय नपाए बालुवाटारको गेट अगाडि प्रदर्शन गर्ने मानवअधिकारवादीहरुले तयारी गरेका छन् । यसका साथै मानवअधिकारकर्मीको टोली जनकपुर जाने कार्यक्रम समेत तय गरिएको नयाँशक्ति पार्टीका नेता गंगानारायण श्रेष्ठले बताए ।
यसैवीच विहीबार बसेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको बैठकमा जनकपुरको अनशनबारे समेत छलफल भएको छ । यसबारे सरकारलाई पत्र लेखेर शर्मा र राईनको जीवन राक्षाका लागि ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय आयोगले गरेको स्रोतले बतायो ।